प्रहरीप्रतिको भरोसा नगुमोस्- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
प्रहरीप्रतिको भरोसा नगुमोस्
काठमाडौँ — १ महिना बितिसकेको छ, कञ्चनपुर अशान्त भएको । त्यहाँका नागरिकको एउटै आवाज सडकमा उर्लिएको छ । निर्मला हत्याका दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याई कारबाही हुनुपर्‍यो । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्‍यो । यो माग कसरी नाजायज हुनसक्छ ? एउटी किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।
देशैभरिबाट न्यायका लागि आवाज उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रहरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दैछ । सडकमा उठेको आवाज दबाउने क्रममा अर्को बालकको जीवन समाप्त भएको छ । पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीसँग न्यायका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । प्रहरी भने घटनाको अनुसन्धानको पहिलो खुड्किलो पनि पार गर्न नसकेर पीडित परिवारतर्फ नै फर्किरहेको छ । यसले समाजमा प्रहरीतर्फ नै औंला उठाउन बाध्य बनाउँछ नागरिकहरूलाई । प्रहरी कसका लागि हुन् ? प्रहरी हत्याराका लागि, प्रहरी शासनसत्तामा बस्नेका लागि या अन्यायमा परेका पीडित नागरिकका लागि ? कञ्चनपुरमा प्रहरीको व्यवहार शंकास्पद देखिएको छ । सरकारले अब शून्यबाट अनुसन्धान सुरु गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने भनेको छ । यस क्रममा यदि सरकारी पक्षबाट गल्ती भएको छ भने संलग्नहरू दोषी नै हुन् । तिनीहरूले पनि सजाय पाउनुपर्छ, अन्यथा समाजमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति आम नागरिकका लागि त्यो एउटा धमिलो छायामात्र हुनेछ ।
– रामकृष्ण बराल
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १०:४९
विकासले सुकुम्बासी बनायो
काठमाडौँ — विकास विरोधी कोही पनि छैनन् । तर विकासको नाममा कसैलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन । जग्गाजमिन भनेको सबै नेपाल सरकारकै हो । हामी सबै उसलाई कर तिरेर बसेका छौं । उसलाई आवश्यक परेका बेला लिन सक्छ । तर त्यसो भन्दैमा सरकार निरङ्कुश बन्न पनि हुँदैन । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं ।
हामी सबैको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो आवाज नसुन्ने ? आफ्नो एकाधिकारअनुसार निर्णय गर्ने ? यस्तो हुनुभएन । लामो समयदेखि विवादमा रहेको सडक सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिले भोगचलन गरेको जग्गाको उचित क्षर्तिपूर्ति नदिई घर भत्काउने र सडक बढाउने काम नगर्नु भनेर जनभावनाको कदर गरेको छ । तर सरकार भने सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयका कारण विकास गर्न पाइएन भनेर कराउँदैछ । आफू अनुकूल निर्णय भए ठिक, होइन भने त्यसको विरोध गर्ने चाला ठिक होइन । सडक फराकिलो पार्दैमा विकास हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो । विकासका लागि भएका सडकहरूको उचित मर्मत–सम्भार हुनुपर्‍यो । विकासका कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा नेताहरूलाई जनताको एउटै प्रश्न छ : ४ वर्षदेखि भत्किएका सडकहरू अहिलेसम्म किन बन्न सकेन ? बेलामा काम नसक्ने ठेगेदारहरूलाई कारबाही किन गरिँदैन ?
जोरपाटी, साँखु, सुन्दरीजल जाने सडक सरकारले फराकिलो बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर कुनै नीति नियमबिना नै व्यक्तिको जग्गा सडकमा हालेर कसैलाई सुकुम्बासी बनाउन त पाइएन नि । गाँस, बास, कपास, शिक्षा औषधि–उपचारको जिम्मा लिएको सरकारले उल्टो बास भएका व्यक्तिलाई समेत घरबारविहीन बनाउन खोज्नु नीतिसंगत होला ?
खेत बाँझिएको छैन
स्थायी सरकारको भूमिका
पानीजहाज होइन, खानेपानी